Rutivi-ne-Rutivi peji SEO Kuenzanisa Turu Martech Zone
Rutivi-ne-Rutivi peji SEO Kuenzanisa Turu
China, July 11, 2013 China, July 11, 2013 Douglas Karr
Pane nguva apo vatengi vedu vanokumbira padivi-ne-padivi kuenzanisa kwemapeji epeji pakati pemapeji ewebhu kuti vaone kana chimiro chepeji chingave chiri kukanganisa mamiriro avo pazwi rakapihwa kana mutsara. Maitiro akanaka anotyisa ega. Isu tinoshandisa maturusi senge Kurira Frog kukambaira saiti uye kutora ruzivo.
Iwo mazwi anoshandiswa mumatagi emetadata, mune zvinyorwa zvemuviri uye mune anchor zvinyorwa mune zvekunze uye zvemukati zvinongedzo zvese zvinoita basa rakakosha mukutsvaga injini optimization (SEO). Iyo SEO Peji Enzanisa Turu inoita kuti iwe ukurumidze kuona iyo yakakosha SEO zvinyorwa zvemukati pane maviri ewebhu peji ma URL nenzira imwecheteyo yekutsvaga injini inokambaira anoiona.
Ini ndanga ndichiita yekutsvaga ndikawana yakanaka padivi-ne-padivi SEO chishandiso chishandiso kubva kuInternet Kushambadzira Ninjas iyo inopa yakawanda yeakakosha maitiro mune yeparutivi-ne-parutivi musasa.
Izvo zvinhu zvakakosha izvo kuongororwa kunoonekwa ndezvi:
Pane-peji ongororo - Inoratidza huwandu hwemazwi anoshandiswa pane peji, kusanganisira zvakabatanidzwa uye zvisina kubatana mameseji, pamwe nenhamba yezvisungo uye saizi peji.
Metadata chishandiso - Inoratidza mavara mune yemusoro tag, meta tsananguro uye meta keywords mateki
Misoro - Inoratidza mavara anoshandiswa mu h1 uye h2 ma tag
Keyword density mudziyo - Inoratidzira huwandu hwezvinhu zvisina kubatana
Batanidza chimiro chishandiso - Inotaridza huwandu uye mhando dzezvinongedzo zvinoshandiswa zvemukati, subdomain, uye zvekunze zvinongedzo
Peji chinyorwa chishandiso - Inoratidza ese ari maviri mavara uye akasarudzika, asiri-akasunganidzwa mavara anowanikwa pane iwo mapeji
Source kodhi chishandiso - Inopa nekukurumidza kuwana kune-peji HTML kodhi
Edzai Kurutivi-ne-Rutivi SEO Kufananidza Turu paInternet Kushambadzira Ninjas.
Social Networkers Vanoti Vanokundwa
Jul 12, 2013 pa 4: 05 AM
mumwe mukuru romukova Doug .. ndanga ndine nguva yakanaka kuverenga basa rako .. Thanks for sharing…
Jul 12, 2013 na12: 42 PM
Kutenda nekugovana izvi, Doug! Ndiri kufarira uye ndichaongorora chishandiso.
Jul 15, 2013 pa 7: 31 AM
Ini ndataura imwe yezvako zvinyorwa zvisati zvaitika uye ndambotaura ipapo ColibriTool - ikozvino ini ndinofunga ino ndiyo nzvimbo chaiyo yekuita izvi 🙂 Ndakaona kuti pane-peji seo chinhu chikuru mune izvo zvishandiso izvozvi. Ndiri kushandisa Colibri uye ndanyatsogutsikana asi ndinofanira kuti iwe wakandikurudzira kuti ndiedze Ninjas, zvinonzwika zvakanaka. Ndatenda!